Tahiry Honko no nahazo ny loka IUCN Pathfinder - Blue Ventures
Faly izahay manambara fa i Tahiry Honko – tetikasa fiarovana karbaona honko tarihin'ny vondrom-piarahamonina lehibe indrindra eran-tany – dia nahazo ny Loka 2021 IUCN Mpisavalalana amin'ny sokajy fiovan'ny toetr'andro. Ity loka ity dia manaiky ireo tetikasa miavaka miasa amin'ny fiarovana sy ny fiarovana ny zavaboary sady mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ny fiarovana, ny teknolojia, ny fitantanana ny tany ary ny fampifanarahana sy ny fanalefahana ny fiovan'ny toetr'andro.
Mitantana ny Fikambanana Velondriake ary miara-mitantana amin'ny Blue Ventures, Tahiry Honko dia mikendry ny hiatrika ny fahapotehan'ny toetr'andro sady hitondra tombontsoa ara-toekarena maharitra ho an'ny mponina ao an-toerana. Ny tetikasa dia manome hery ny vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fandoavam-bola ho an'ny tetik'asa momba ny tontolo iainana izay manolotra fomba maharitra sy maharitra ho an'ny vondrom-piarahamonina hamatsiana ny fiarovana ny ala honko.
Amin'ny alàlan'ny fivarotana crédit karbônina, entanina ny vondrom-piarahamonina hampihena ny fandripahana ala sy ny fanimbana ary handray anjara amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny ala honko. Izany dia tsy vitan'ny hoe miaro ny toeram-ponenana manan-danja izay fitaovana amin'ny fanalefahana ny fiakaran'ny entona karbôna fa miaro ihany koa ny karbaona sarobidy efa voatahiry ao amin'ny biomass sy ny sediments.
Ny vola avy amin'ny fivarotana crédit karbonika dia manampy ny vondrom-piarahamonina hampiroborobo ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa ambanivohitra izay manampy amin'ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny tolotra ara-pahasalamana. Lavitra ny fiantraikan’izany asa izany, ka samy mandray soa avy amin’ny fiarovana iraisan’ireo ala ireo ny mpiara-belona rehetra. “Ity loka ity dia porofon’ny asa mafy nataon’ny fikambanana Velondriake nandritra ny fito taona ary hanampy amin’ny fiatrehana ny fahapotehan’ny toetr’andro sy hanamafisana ny fiaretan’ny fiaraha-monina amin’ny alalan’ny fitahirizana sy famerenana amin’ny laoniny ny ala honko any atsimo andrefan’i Madagasikara”, hoy i David Parreño Duque, Blue Ventures. field programs support manager.
Ny fahazoana io loka io dia manasongadina ny fitomboan'ny fankasitrahana ho an'ny vahaolana mifototra amin'ny zavaboary hanalefahana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ny toeram-ponenan'ny ranomasimbe dia manome fahafahana tena sarobidy hiatrehana ny hamehana ara-toetr'andro izay tsy mitsaha-mitombo, ary noho io loka io dia entina amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahombiazan'ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina.
Fantaro bebe kokoa momba ny Lokan'ny Mpisavalalana Eto
Tsidiho ny tranokalan'ny PANORAMA Eto.
Jereo ny firaketana ny lanonana Eto.
Blue Carbon, karbaona, iucn, Madagasikara, honko, honko, Lokan'ny mpisava lalana, Tahiry Honko